Dowladda Somaliya oo cambaareysay duqeyntii deegaanka Ceelcadde | Dhacdo
Dowladda Somaliya oo cambaareysay duqeyntii deegaanka Ceelcadde
Dowladda Federaalka Somaliya waxay si adag u cambaareyneysaa duqeymaha joogtada ah ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Kenya ee lagu dilo, laguna dhaawaco dadka rayidka ah ee ku nool Somaliya.
Weerarkii cirka ee aan loo aabbo yeelin ee ka dhacay Ceelcadde iyo Hisa-u-gur oo ka tirsan Gobolka Gedo, Jubbaland State, 3-dii Juun 2021, waa tusaalaha ugu dambeeyay ee hawlgalada Ciidanka Difaaca Kenya (KDF) ee keenay dhimashada iyo naafaynta dad rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruur oo si isa soo taraysa u noqdaya astaan ​​aan fiicnayn oo ah hannaanka hawlgalka ee ciidamada cirka ee Kenya.
Hawlgaladaan KDF ee lagu soo koobay sheegashada fulinta hawlgalada ka dhanka ah xagjirnimada shaki la’aan ayaa loo qabtay qaab ka baxsan waajibaadkooda hoos yimaada waajibaadka UNSC ee amarka AMISOM, gaar ahaan OP17 oo hoosta ka xarriiqaya muhiimadda ay leedahay in ciidamada AMISOM ay gutaan waajibaadkooda iyagoo si buuxda ugu hoggaansamaya dowladaha ka qayb qaadanaya. waajibaadka saaran sharciga caalamiga ah, oo ay ku jiraan ilaalinta dadka rayidka ah, gaar ahaan haweenka iyo carruurta.
Waxaa muuqata inay sii kordheysa muuqato daandaansiga iyo kala sooc la’aanta ay ciidamada KDF ay hawlgalada ka fuliyaan Somaliya, iyagoo ku marmarsiyoonaya la dagaalanka xagjirnimada, waxna ku soo kordhin doonin dadaalada loogu jiro xasilinta iyo ka hortagga xagjirnimada, laakiin kwliya waxay sii xagjirineysaa beelaha taageera xag-jirnimada.
Dadka rayidka ah iyo hantidooda waa in aysan waligood noqon bartilmaameedka ficil militari. Dowladda Federaalka ah ee Somaliya waxay sare u qaadday tixgelinta xaqdarrada ah ee naf iyo maalba shacabka rayidka ah ee KDF, oo ah waajibaadka ugu weyn ee AMISOM, marar badan oo lala yeeshay Jamhuuriyadda Kenya iyo Midowga Afrika.
Waa in la ogaadaa, madax-adayga Jamhuuriyadda Kenya oo aan awood u lahayn inay ilaaliso heerka laga filayo KDF. iyada oo la waafajinayo waajibaadkeeda sharciga caalamiga ah ayaa ah sababta ka dambeysa inuu xumaado xiriirka diblomaasiyadeed, taas oo keentay in DFS ay jarto dhammaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Kenya.